ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ရဲ့ အဖိုးတန်သော စာတမ်း တစ်စောင် | ဒီရေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ရဲ့ အဖိုးတန်သော စာတမ်း တစ်စောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ရဲ့ အဖိုးတန်သော စာတမ်း တစ်စောင် (English & Burmese Version)
၁၉၉၄ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ ၂၆ ရက်အထိ ကောစတာ ရီကာနိုင်ငံ (Costa Rica) ဆန်ဟိုဆေး မြို့ တွင် ကျင်းပခဲ့သော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ ကော်မရှင်၏ အစည်းအဝေးတွင် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ၃ ခုကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ တတိယမြောက် ပန်းတိုင်မှာ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ ဒိုင်နမစ်သစ်တစ်ခုကို တိုးမြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှု (the culture of peace)နှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ယဉ်ကျေးမှု (the culture of development) တို့ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင် အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုကို နိုင်ငံတွင်းမှာ သာမက နိုင်ငံတကာ စံချိန်ဖြင့် မြှင့်တင်လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုပြင်ကော်မရှင် အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှု၊ ဒီမိုကရေစီ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ယဉ်ကျေးမှု တို့သည် တခုနှင့်တခု ခွဲခြား၍မရကြောင်း တင်ပြနိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ ထိရောက်သော အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွတ်မှုသည် ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ယဉ်ကျေးမှုခြင်း အပြန်အလှန် ပဋိပက္ခ ဖြစ်မှုမှ ကာကွယ် ပေးခြင်းများတွင် အကျိုး ရလာဒ်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေ ခဲ့သော ဖရန်ကွားစ် ပါးရိုး (Francois Perroux) ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၏ အမြင်သစ်တစ်ခု (A New Concept of Development) စာအုပ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဖြစ်နိုင်သော အချက်များကိုတင်ပြထားသည်။ သူက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သည် ပြဇတ် ဆန်ဆန် အသိစိတ် နိူးကြားမှု ဖြစ်နေခြင်း၊ ကတိတစ်ခု၊ ကိစ္စတရပ် (သို့) မကြွင်းမကျန် ရပ်တည်နေရုံမှသာ ကိုယ်စားပြုနေကြမည် ဟု ဖွင့်ဆိုပြသည်။ ယင်းတွင် အသိဥာဏ် ပညာ အရလည်း မှေးမှိန်သော သိမှုတစ်ခုသာ ဖြစ်နေမည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းစာအုပ် နောက်ပိုင်းတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု (Personal development) သည် အခြား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများ၏ အဓိက အကြောင်းရင်းကြီးများမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ယူဆချက်သည် တိုးတက်ရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် အခြား အခန်း ကဏ္ဍတွေ အတွက် စီမံကိန်းများတွင် လူသား နှင့် ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုးများ (Human and Cultural values) သည် ခိုင်မာသော နေရာတွင်ရှိသည်ကို ဖော်ပြနေသည်။
လူသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ထင်မြင် ယူဆချက်များကို အဓိကအချက် အဖြစ် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး ပညာရှင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ် သူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ် များတွင် ထည့်သွင်း ယူဆနေစဉ် အတွင်းမှာဘဲ ဈေးကွက်စီးပွားရေး (Market Economy) ကို ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်း ဆိုင်ရာ တိုးတက်ရေး အတွက် အလျှင်မြန်ဆုံး နှင့် အသေချာဆုံး နည်းလမ်း အဖြစ် အစိုးရများက သတ်မှတ်လာကြသည်။ စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်မှု များသာ တိုင်းပြည်တွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာ အားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ တင်မြင် ယူဆ နေကြသည်။ စီးပွားရေး ကိုသာ “dues ex machina” ခေါ် “ လိုလား တောင့်တ နေတဲ့ အာရှသစ် အတွက် တံခါးအားလုံးရဲ့ သော့က လောက်တွေ အတွက် အရေးပါ ဆုံးသော သော့တစ်ချောင်း” အဖြစ်တင်စားခဲ့ကြသည်။ ထိုအပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လုံခြုံရေး စိန်ခေါ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် တာဝန်ယူမှု စိန်ခေါ်မှု၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ စိန်ခေါ်မှု၊ တရားမျှတရေး နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စိန်ခေါ်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု ပြန်လည် ရှင်သန်ခြင်း နှင့် ပလူရဲလ် လစ်ဆင် (Pluralism) စိန်ခေါ်မှု ကိုအောင်မြင်စွာ ဆုံဆည်းနိုင်ရန် အတွက် “တောင့်တင်း ခိုင်မာသော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” ကိုသာ “မရှိမဖြစ် အရာ” တခုလိုမြင်ခဲ့ကြသည်။
“စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” သည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုပိုင်း ဆိုင်ရာ ပလူရဲလ် လစ်ဆင် (Pluralism) တို့်အတွက် မရှိမဖြစ် ဖြစ်သည် ဆိုသောအမြင် နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး တို့၏ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုသည် “စဉ်ဆက်မပြတ် လူသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” (Sustained human development) အတွက် မရှိမဖြစ်ဖြစ်သည် ဆိုသောအမြင်တို့သည် သီအိုရီဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှု အတွက်သာ ခြားနားသည်ဟု အပေါ်ယံထင်ရသည်။ သို့ရာတွင် အနီးကပ် လေ့လာကြည့်မှသာလျှင် သူတို့၏ အခြေခံကျသော အစီအစဉ်ကွဲပြားမှုများကို ဖြစ်စေသော မတူကွဲပြားသော ချဉ်းကပ်မှုတွေကို တွေ့ရသည်။
စီးပွားရေးကို တံခါးအားလုံး၏ သော့ ကလောက်များ အတွက် အရေးပါဆုံးသော သော့တံ တစ်ချောင်း အဖြစ် သဘောထား လိုက်ခြင်းသည် လူချမ်းသာများ သာလျှင် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူများ ဖြစ်သွားသည်။ သူတို့၏ စီးပွားရေး လက်နက်ကိရိယာ သာလျှင် အားလုံးကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် သဘောဖြစ်သွားသည်။ ဒီအချက်ဟာ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက လူသားတိုို့ အတွက် လုပ်ဆောင် နေသည်ဟု ခံယူထားသော ကမ္ဘာတစ်ခု၏ အမြင်နှင့် ကွဲပြားခြားနားနေသည်။ ယင်းကမ္ဘာတွင် ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု တို့၏ တပေါင်းတစည်းတည်း ဖြစ်မှုသည် လူသားတို့၏ အစွမ်းသတ္တိကို ဖြစ်စေမည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးသည်။
ယင်းတန်ဖိုး စနစ်တွင် ပါဝါရှိသူ နှင့်ပါဝါမရှိသူကြားတွင် တူညီမည်မဟုတ်ပေ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ (Privileged) နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိသူ (Unprivileged) တို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များ သည်လည်း မတူကွဲပြား သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝါ နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် အရေးကိစ္စတွင် ချမ်းသာသူ (haves) နှင့် ဆင်းရဲသူ (haves-not) ကြားကွဲပြားခြားနားမှုသည် အရည်အတွက်ဆိုင်ရာ ကွဲပြားမှုသာလျှင် မဟုတ်ပေ။ သူတို့၏ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ နှင့် အတွေးအခေါ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွင်လည်း အတော်အတန် ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ စီးပွားရေး ကိုသာ အလေးပေး သူများ အတွက် ပါဝါ နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုစ္ဆာကိုသာလျှင် ဇောင်းပေးနေရ၍ မျှမျှတတ ဖြစ်ခဲသည်။ ဆင်းရဲမှု ပြဿနာသည် လူ့သားတို့ အတွက် စီးပွားရေး ချဉ်းကပ်မှု သတ်သတ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ပြည့်စုံမည်မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ ဆရာဝန်တွေ၊ အဟာရ ပညာရှင်တွေ၊ အခြား သိပံပညာရှင် တွေတောင် ဆုံးရှုံးလစ်ဟာခြင်း (deprivation) ၏ ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အခြေအနေတွေ အကြောင်း ပြောပြနိုင်သည်။
အဲဒါဟာ ဘာကို ဖော်ပြနေသလဲ ဆိုတော့ ဆင်းရဲသားတွေ အတွက် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ခြင်းသည် မလုံလောက်ကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ သူတို့ကို လုံလောက်တဲ့ ပံ့ပိုးတွန်းအားပေးမှု တွေလုပ်ပေးရမယ်။ အကြင်နာမဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ငါတို့ဟာ အစွမ်းမရှိတဲ့ သူတွေ၊ အကူအညီမဲ့သူ တွေလို့ ထင်နေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ ကိုပြောင်းလဲပေးရပါမယ်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း (empowerment) ဟာ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှစ်ခုစလုံး အတွက် အဓိက ကျပါတယ်။ အဲဒါဟာ နိုင်ငံ (သို့) လူမှုအသုံးအဝိုင်း အပေါ် တွန်းအားပေးနိုင်သည့် စွမ်းရည် မည်သူ့တွင်ရှိသည်၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခေါင်းစဉ် အောက်တွင် လက်တွေ့ကျသော လုပ်ဆောင်မှုများ ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မည့်သူ ကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ တပါတီအာဏာရှင် (totalitarian) စနစ် ပီပြင်လေလေ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများဟာ အုပ်စိုးသူအီလစ် (ruling elite) တို့၏ လက်ထဲတွင်ရှိလေ ဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကျဉ်းမြောင်းသော ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်လေဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှု ကိုလည်း “ခေတ်အမှီဆုံး” (the most recent)၊ “အဆင့်အမြင့်ဆုံးသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (သို့) ဘဝရဲ့ ရှင်သန်မှု နှင့် လုံခြုံမှု ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့ကြသည်။
အာဏာပိုင် အစိုးရအများစုဟာ ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရှေ့မျက်နှာပြင် မှာတော့ ပေါ်လွင်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒတော့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင် ရမှာကိုတော့ တွန့်ဆုတ် နေကြတယ်။ အဲ့လို အစိုးရ မျိုးတွေဟာ ခေတ် နဲ့အမီ လိုက်နိုင်ဖို့ သူတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ် တစ်ခုဆီ ရောက်နိုင်မယ့် အမျိုးသားစရိုက် (သို့) ပြည်တွင်းဖြစ် စံပြ လမ်းစဉ်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း ဖော်ပြ တတ်ပါ သေးတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ပြီးပြီးချင်း ဆယ် စုနှစ်များအတွင်းမှာဘဲ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ (Socialism) ဟာ လူကြိုက် များလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၈၀ နှောင်း ပိုင်းကာလတွေကစပြီး ဒီမိုကရေစီဝါဒ (Democracy) ဟာ အခြေခိုင်မာလာခဲ့တယ်။ အမျိုးသားရေး (သို့) တိုင်းရင်းဖြစ်လမ်းစဉ်ဟာ ဆိုရှယ်လစ်ဇင်လား … ဒီမိုကရေစီလား … ဆိုတဲ့ အာရုံစိုက်မှုဟာ လုပ်ငန်းစဉ် (Process) နှင့် ပန်းတိုင် (Goal) နှစ်ခုစလုံးအနေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်လက်ဖြစ်ခြင်း သက်ရောက်မှုများရှိနေ သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဓလေ့ ထုံးစံ အားဖြင့်သော် လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်ပိုင်းအရသော်လည်းကောင်း၊ သီးခြားအသုံးအနှုန်းများအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ (သို့) ဆိုရှယ်လစ် ၀ါဒ တစ်ခုခုကို မဖြစ်မနေ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြ သည်။ အဲ့ဒါဟာ ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူ (Arbiter) နှင့် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆို ပေးနိုင်သူ (Interpreter) ကဲ့သို့ လို အပ်သောနေရာများအတွက် နိုင်ငံရေးအီလစ်များ ဖြစ်တည် ပေါ်ပေါက်ရေးကို ဖြစ်စေသည်။ ထိုသူများဟာ ယဉ် ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် (Do or Do Not) တွေကို လုပ်ဆောင် သည်။
လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေပြုတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး တွေဟာ ယဉ်ကျေးမှု ခိုင်မာမှု၊ လူမှုရေး တည်ငြိမ်မှု နှင့် အမျိုးသား လုံခြုံရေး ဆိုတဲ့ နာမည်တွေ နဲ့တပ်ပြီး အာဏာပိုင်အစိုးရတွေရဲ့ တားဆီး ပိတ်ပင်ခြင်းကို ခံနေရပါတယ်။ အနောက်တိုင်း လူမှု အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး နိုင်ငံတွေမှာဆို ဒီမိုကရေစီကို အထိန်းအကွပ်မဲ့သော လွတ်လပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးကြည့် တစ်ကိုယ်ကောင်း ၀ါဒတို့ရဲ့ ဘိုးဘေး ဘီဘင်ကြီး (Progenitor) အဖြစ် ထင်ယောင်မြင် ယောင်လုပ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း အယုံသွင်းလာတာတွေရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီ တန်ဖိုး (Democratic Values) တွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တွေဟာ အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဆန့်ကျင် နေတယ်လို့ ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားတွေ မရှိဘဲ စွပ်စွဲတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တကယ် အကျိုးရှိအောင် လိုအပ်သလို ပြုပြင် ယူရမယ်လို့ ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မသင့်တော်သေးဘူးလို့လည်း လူတွေကို ပြောကြတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ အချိန်တွေက အများကြီးပေးနေရတယ်။
ဒီလို ထင်မြင် ယူဆချက်တွေကို ချေပမှုရဲ့ ပထမ ပုံစံကတော့ အမေရိကန် (USA) ဟာ ဒီမိုကရေစီ ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အကောင်းဆုံး နမူနာတစ်ခုပါဘဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ အခြားယဉ်ကျေးမှုများကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့အပြင် ဒီမိုက ရေစီယဉ်ကျေးမှုရဲ့အရေးအပါဆုံး ကိုယ်စား လှယ်တော်ကြီး လိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် အချို့တွေက ဒီအချက် တွေကိုကျော်ပြီး အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကို ဣနြေ္ဒမဲ့ အရှုပ်ထုတ်ကြီးလို့ မြင်စေချင် ကြပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီမှာဆိုရင် I-Want-It-All ဖောက်သည်ယဉ်ကျေးမှု၊ မီဂါစီးတီးယဉ်ကျေးမှု (Megacity Culture)၊ စူပါပါဝါယဉ်ကျေးမှု၊ နယ်ခြားစီးခြား ယဉ်ကျေးမှု (Frontier Culture)၊ ကူးပြောင်းလာသူယဉ်ကျေးမှု (Immigrant Culture) တို့ပါဝင် သည်။ ထို့ပြင် ခိုင်မာသော မီဒီယာ ယဉ်ကျေးမှု (Media Culture) လည်းဘဲရှိသေးသည်။ ယင်း မီဒီယာ ယဉ် ကျေးမှုသည် အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ များမြောင်လှသော ပြဿနာ ပေါင်းများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု လည်းဆိုကြသည်။ ထို့ပြင် လမ်းမပေါ်အကြမ်းဖက်မှု၊ မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားပြုမူ မှသည် လက်ထပ်ထိမ်းမြား ခြင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအထိ ရှိသည်ဟု ဆိုကြသေးသည်။
အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် အားထုတ်နေသော တတိယကမ္ဘာမှ နိုင်ငံ များသည် လူမျိုးစု အမျိုးမျိုး ပါသော လူ့အဖွဲ့အစည်း (Multiracial Societies) များဖြစ်ကြသည်။ ယင်းနိုင်ငံများ တွင် ချယ်လှယ်နေသော လူမျိုးစုကြီး တစ်ခုရှိသည်။ တခါတရံ အုပ်စုငယ်များ မြောက်မြားစွာလည်း ရှိတတ်သည်။ ဆင်းရဲခြင်းဟာ အခြေခံစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကျေနပ်ဖွယ်မကောင်းတော့သလို “ လူနည်းစု ” (Minority) သည်လည်း အရေအတွက် အားဖြင့်မျှသာ သတ်မှတ်၍ မရတော့ပေ။ ဥပမာအနေနဲ့ “ မြန်မာ့သမိုင်း မှ လူနည်းစုများကို လေ့လာခြင်း ” စာတမ်းတစ်ခုတွင် တွေ့နိုင်သည်။ နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း စဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူနည်းစုများ၏ အထင်အမြင်သည် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်ခုက သူ့တို့ကိုယ်သူတို့ နိုင်ငံတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သောအခါ အခြားအုပ်စုများသည် လူ နည်းစုများ ဖြစ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် မိရိုးဖလာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူနည်းစုများ ရှိနေခဲ့ပြီး ပါဝါအီလစ် (Power Elite) များနှင့် နီးစပ်သောသူများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ အထက်တန်းကျသူများအဖြစ် တွေးထင်နေကြပြီး ပါဝါအီ လစ်များနဲ့ အလှမ်းဝေးသူများကို အဆင့်နိမ့်ကျသူ (Inferior) များအဖြစ် တွေးထင်နေကြသည်။ လူများစု တည်ဆောက်ခြင်း အတွက် စံနှုန်းများကို လူမျိုးရေး (Race) သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုကို အခြေပြုခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ပါဝါပိုင်ဆိုင်မှုကို အခြေပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူနည်းစုများဟာ ပါဝါအားနည်းသော လူများဖြစ်ကြရသည်။
မူရင်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာကို ဖတ်ချင်ယင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူ ဖတ်ရှူနိူ်င်ပါသည်။
ဘာသာပြန်။ ။ ဘလောခ့်ဂါ အလင်းဆက် (၉. ဇွန်လ. ၂၀၁၀)